आज सबै देशको मूल्य बढ्यो, कुन देशको कति ? हेर्नुहोस् … – Nepal Trending
आज सबै देशको मूल्य बढ्यो, कुन देशको कति ? हेर्नुहोस् …
On १७ चैत्र २०७५, आईतवार १०:०७
काठमाडौँ । शुक्रबारको तुलनामा आज आईतबार अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको मूल्य उकालो लागेको छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय १० रुपैयाँ ३५ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य १ सय १० रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै युके पाउण्ड १ को खरिददर १ सय ४४ रुपैयाँ ३९ पैसा, १ सय ४५ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ४२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको छ। कतारी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ३१ पैसा छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ।
युएई दिराम १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ४ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ २१ पैसा रहेको छ भने मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ३ पैसा छ भने बिक्रिदर २७ रुपैयाँ १८ पैसा छ। दक्षिण कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ९ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ६२ रुपैयाँ ८७ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ३ सय ६४ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर २ सय ९२ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर २ सय ९४ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ। तालिकामा हेर्नुहोस् राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य देशको विनिमय दर
कोपा अमेरिकाको लागि अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय टिम घोषणा, मेस्सीसँगै को–को परे ?
बिदेशमा हुनेहरुको लागि खुसिको खबर , यस्तो छ आजक बिनिमय दर